Macluumaadka Joojinta Tubaakada ee Bixiyeyaasha Vermont - 802Quits
SIDEE LOOGU DIIWAAN
Barnaamijyada Joojinta Vermont
Jooji Macluumaadka Daawada
Dhalinyarada iyo Dhalinyarada waaweyn
Koodh iyo Biilasha
Bogga ugu weyn » BIXIYAYAASHA
Marnaba lama arag waqti aad uga muhiimsan bukaanadaadu inay joojiyaan.
Dhiirigelintaada, u damqashadaada iyo talabixintaadu waa muhiim inta lagu gudajiro safarka bukaan socodka. Waan kaa caawin karnaa wada hadaladaas.
Weydii booqasho kasta. Haddii bukaankaagu uusan u muuqan "diyaar," ama haddii ay isku dayeen marar badan, waxaad ku dhiirrigelin kartaa inay ka fiirsadaan joojinta kaliya adoo weydiinaya. Isticmaal kuwan Qodobbada Hadalka (PDF) oo ay soo saareen bixiyeyaasha Vermont.
Tixraac 802Quits. Barnaamijyada joojinta dadka waaweyn iyo dhalinyarada Vermont ee kaladuwan ayaa u oggolaanaya bukaanadaada inay helaan waxa iyaga ku habboon. Kheyraadka waa bilaash waana dhameystiran yihiin waxaana laga heli karaa khadka tooska ah, shaqsi ahaan, taleefan, qoraal iyo helitaanka daaweynta nikotiinta (NRT), oo ay ku jiraan balastarro bilaash ah, xanjo iyo lozenges. NRT waxaa heli kara dadka qaangaarka ah 18+ waxaana lagugula talinayaa in lagaa qoro oo aan lagu qorin warqad rijeeto ah oo loogu talagalay dhalinyarada da'doodu ka yartahay 18 sano jir kuwaa oo si dhexdhexaad ah ama si xun ula qabatimay nikotiinka loona dhiirigeliyo inay joojiyaan.
Kheyraad gaar ah ayaa loo heli karaa dad gaar ah sida Xubnaha Medicaid, LGBTQ, Hindida Mareykanka iyo uurka Vermonters.
Xirmada Qalabka Kheyraadka Joojinta ee Bixiyeyaasha
Soo dejiso qalabka iyo agabyada laga soo ururiyey boggan, oo ay ku jiraan qodobbada hadalka, qalabka bukaanka, hagayaasha, bandhigyada iyo foomamka la xiriira ka-qaybgalka bukaannada la-talinta joojinta tubaakada, iyadoo la tixraacayo 802Quits, barnaamijyada Joojinta Vermont, joojinta daawada iyo qulqulka dhalinyarada.
Soo Degso Qalabka>
Tilmaamaha ku-takhasuska bukaan-socodka ee ku-tiirsanaanta tubaakada ee dadka waaweyn.
Tilmaamaha barashada bukaan-socodka ee 2020 waxay ka kooban tahay toddobo talooyin oo cusub oo leh isbeddello ficil oo fudud oo kordhin kara waxtarka daawada ku tiirsanaanta tubaakada. Laba ka mid ah talooyinka waxaa ka mid ah:
Dadka waaweyn ee ku tiirsan tubaakada ee daaweynta la bilaabay, waxaan kugula talineynaa varenicline in ka badan balastar nikotiin ah.
Dadka waaweyn ee ku tiirsan tubaakada oo aan diyaar u aheyn inay joojiyaan isticmaalka tubaakada, waxaan kugula talineynaa in daaweeyayaashu ay bilaabaan daaweynta varenicline halkii ay ka sugi lahaayeen inta bukaanku diyaar u yihiin inay joojiyaan isticmaalka tubaakada.
Akhriso tilmaamaha cusub oo leh dhammaan toddobada talobixin ee joornaalka Mareykanka ee Neefsashada iyo Daryeelka Khatarta ah.
Daawo fiidiyow 2-daqiiqo ah soo koobista tilmaamaha cusub.
Faa'iidooyinka Joojinta Tubaakada ee Medicaid
Way ka sahlan tahay sidii hore in laga caawiyo bukaanadaada inay joojiyaan. Qaar badan oo reer Vermont ahna kama warqabaan waxtarka guud ee laga heli karo Medicaid iyo barnaamijka 802Quits ee loogu talagalay joojinta dadka waaweyn iyo dhalinyarada.
Wax badan ka baro>